Bayaanka Xuquuqda Immigrant Colorado ee go'aanka Maxkamadda Racfaanka si dib loogu soo celiyo dacwadda ka dhanka ah Teller County's 287(g) - Isbahaysiga Xuquuqda Immigrant Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Press Release > Bayaanka Xuquuqda Immigrant Colorado ee go'aanka Maxkamadda Racfaanka ee lagu soo celinayo dacwadda ka dhanka ah Teller County's 287(g)
Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado waxay bogaadinaysaa go'aanka Maxkamadda Racfaanka ee dib u soo celinta dacwadda ka dhanka ah Teller County 287(g) heshiiska socdaalka iyo dhaqangelinta kastamka (ICE). Dacwada waxa ay keentay magaca Ururka Xorriyadda Madaniga ah ee Maraykanka (ACLU) ee Colorado, xubin CIRC, waxay rabta in la dhameeyo heshiiska isticmaala doollarka cashuur bixiyaha si loogu maalgeliyo fulinta ICE ee khatarta ah ee xabsiyada maxalliga ah.
ICE waxay si joogta ah u faafisaa cabsida iyadoo dhibaataysa, xidhaysa, oo xidhaysa asxaabta, deriska, iyo xubnaha qoyska. Halkii laga oggolaan lahaa dadka inay kiisaskooda socdaalka ka daba tagaan guryahooda, ICE waxay kala soocdaa qoysaska, waxay ka saartaa maal-qablayaasha muhiimka ah, waxayna xumaynaysaa kuwa ugu yar iyo kuwa ugu nugul. Bulshooyinka way badbaado badan yihiin marka ay sharci fulinta u adeegaan dhammaan xubnaha bulshada iyadoon loo eegin sharciga socdaalka, iyo wada shaqayn kasta oo lala yeesho ICE ayaa taas ka dhigaysa mid aan macquul ahayn.
Xafiiska sheriff-ka ee degmada Teller ayaa muddo dheer caan ku ahaa si xun ula dhaqma dadka soogalootiga ah. Waxa ay ahaanaysaa gobolka kaliya ee sida rasmiga ah ula shaqeeya ICE iyada oo loo marayo heshiis 287(g) ah oo ay taageerto cashuuraha maxaliga ah. Degmo kasta oo kale oo ku yaal Colorado waxay aqoonsatay waxyeelada ay heshiisyadani u keenayaan badbaadada bulshada sababtoo ah u beddelka sharci fulinta maxalliga ah wakiilada socdaalka federaalka waxay dhalinaysaa kalsooni darro, khatar gelinaysa qof walba. Taliyaha degmada Teller Mikesell ayaa sii waday inuu si fagaare ah u ansixiyo dhaqankan khatarta ah, isagoo ku qasbaya dadka degmada Teller inay maalgeliyaan nacaybka uu u qabo soogalootiga. CIRC waxay maanka ku haysaa dawlad aan wada shaqayn ka dhaxayn sharci fulinta deegaanka iyo ICE si loo abuuro bulsho badbaado leh, sinaan iyo cadaalad ah oo ka tirsan degmo kasta. Dacwadani waxay ina soo dhawaynaysaa hal tallaabo oo aragtidaas ah.